Iri Isii: Otu Ọrụ Ọrụ tochị Ha Ha niile | Martech Zone
Wednesday, June 20, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’itinyela ịdebanye aha azụmaahịa gị na plethora nke saịtị saịtị ebe ahụ, ọ bụ nnukwu nnụnnụ mmiri. Ọ bụghị naanị na saịtị ọ bụla nwere usoro ndebanye aha dị iche, ha niile na - egbochi ma na - etinye gị na ndepụta ndepụta. Anyị debara aha na Yext taa ma kwụọ ụgwọ maka ngwugwu PowerListings ya. Na ihe na-erughị $ 50 kwa ọnwa, ọ na-enye gị ohere ijikwa ihe karịrị 30 ndepụta ndepụta saịtị niile site na ikpo okwu etiti.
Nke a bụ usoro nlekọta na-enye ozi ndepụta gị:
Ebe ọ bụ na isi mmalite ọ bụla nwere nchekwa data nke ya, enwere 100s nke ọdụ data nke ozi mpaghara na ebe ahụ. Mana nsogbu bụ, ha apụtaghị kpamkpam, yana mgbe data gbanwere, ha na-ada ngwa ngwa. N'ezie, na nkezi, 6% nke ndepụta na-agbanwe kwa ọnwa, ihe njedebe bụ na ihe karịrị 20% nke nchọta mpaghara na-alọghachite ozi ezughị ezu iji kwụsị ndị ọrụ. Na nsonaazụ njedebe bụ ihe na-akụda mmụọ maka azụmaahịa na ndị ọrụ… Yext PowerListings na-egbo nnukwu nsogbu a site na ịgbadopụta nsonaazụ ọchụchọ mpaghara na saịtị niile dị iche iche na otu usoro.
Nke a bụ ihuenyo ọchụchọ ebe ị nwere ike chọọ ịchọta ma jikọọ ndepụta mpaghara gị na saịtị ọ bụla:
N'ime nkeji ole na ole, ndepụta anyị na-arụ ọrụ na saịtị ole na ole ma anyị na-enweta ozi email ka ndị ọzọ na-adị ndụ. Ọ bụ ezie na anyị anaghị atụ anya inwe nnukwu iju mmiri nke azụmahịa dị ka ụlọ ọrụ site na nyocha mpaghara, ọ ka dị mkpa na edepụtara azụmahịa anyị n'ụzọ ziri ezi wee chọta ya na saịtị ndị a niile. Karịsịa site na uto dị egwu nke ọrụ ndị dabere na ọnọdụ na ekwentị mkpanaaka. Anyị chọrọ ka a chọta anyị n’ime obodo dịka n’obodo na n’uwa. Y’oburu n’ire ahia ahia, odi nkpa!
The interface dị mfe iji, na-enye ohere multi-ọnọdụ ụlọ ọrụ jikwaa ọnọdụ ha na ihe Enterprise mbipute. Were ule nke Yext site na na-acho ahia nke aka gi gafee mpaghara saịtị. Ekele dịrị ndị enyi anyị na Mgbe niile maka ịchọta!
Tags: localndepụta mpagharaMobile na Mbadamba ụrọ
Guy Manningham kwuru
Jun 20, 2012 na 7: 04 PM
Kedu ụdị nsonaazụ ndị ị nwetagoro ruo ugbu a?
Jun 20, 2012 na 9: 15 PM
Ọ rụbeghị awa iri abụọ na anọ, mana e debanyere aha 24, nke ọrụ ọnọdụ 21, bipụtara.
Jun 25, 2012 na 3: 07 PM
Ọ bụghị oke ihere! Daalụ maka ịkekọrịta.
Jun 21, 2012 na 5: 53 PM
Havebọchị 2 na ọrụ ọnọdụ 24 edebanyela aha, emelitere ma bipụtara.
Jun 22, 2012 na 10:04 AM
N'ụtụtụ a, m natara ederede na SuperPages bipụtara. Nke ahụ bụ otu n’ime isi ihe m chọrọ ịhụ ka emelitere!